Shiinaha 95% Alumina dahaarka dhoobada & dhuumaha birta oo si toos ah looga sameeyay warshada warshada Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | YUNFENG
95% Alumina dahaarka dhoobada & dhuumaha birta oo si toos ah looga sameeyo warshada Shiinaha
* Qaaday aagga arjiga: Meelaha arjiga: Saliidda, macdanta, makiinadaha birta, dhirta korantada iyo warshadaha kale dusha sare ee qalabka ama walxaha gudbinaya dareeraha maraya qalabka dhuumaha u adkaysta, saamaynta ugu weyn ayaa si wax ku ool ah loola dagaallamayaa saamaynta saameynta walxaha derbiga la mariyey. * Waxyaabaha soo-saarka: Qalabka wax lagu nadiifiyo ee qallalan, heerkul sarreeya, adag Rockwell HR80-90, oo kaliya labaad dheeman. Arimaha ubaahan feejignaanta gaadiidka iyo rakibida dhoobada ...
Arimaha ubaahan taxadarka gaadiidka iyo rakibida tuubada dhoobada
1. Dhuumaha isku dhafan ee dhoobada dhoobada ayaa leh adkeyn iyo adkeyn wanaagsan, laakiin waa in si tartiib ah loo dhigaa habka gaadiidka iyo rakibaadda si looga fogaado isku dhac halis ah, gaar ahaan si looga fogaado taabashada tooska ah ee qalabka birta ama saameynta lakabka dhoobada ee dusha sare.
2. Tuubbada foorarsiga ee yunfeng waxaa lagu rakibay si toos ah. Marka tuubada laabaneyso la rakibo, jihada ay tilmaamayso fallaarta dusha sare ee tuubada foorarsiga ah waa inay ahaataa mid la jaanqaadaysa jihada socodka ee gudbinta qalabka
3. Marka la rakibayo dhuumaha, tuubada waa in lala jaanqaadaa xariiqda dhexe oo heerka waa in la waafajiyaa si loo hubiyo in labada daraf ay si sax ah u wada kulmaan.Qaxa labada daraf waa in lagu xakameeyaa gudaha 1.0mm.
4. Marka isku xidhka tuubbada jilicsan loo isticmaalo isku xidhka iyo rakibida tuubada, dhererka la galiyay labada daraf ee isku xidhka tuubbada jilicsan waa in si siman loo hagaajiyaa.Maadaama isku dheelitirka balaadhinta kuleylka ee tuubbada isku dhafan ay qiyaastii tahay 1/3 ee birta , nadiifinta balaarinta waxaa lagu yareyn karaa 3-5mm.
5. Markaad isticmaaleyso isku xirka flange, dhamaadka flange waa inuu raacaa dhamaadka tuubada isku dhafan.
6. Sababtoo ah waxqabadka wanaagsan ee alxanka ee tuubbada isku dhafan, isku xirka tuubada waxaa lagu qaban karaa alxanka. Si kastaba ha noqotee, marka alxanka, 45o-60o "V" nooca xagalka xagalku waa 2-4mm farqiguna waa 0.8-1.2mm.
Hore: Duufaan Ceramic ayaa safafka ugu jirta Macdanta
Xiga: Hexagonal Ceramic Wear-Resistant Liner Hopper Xidho liner dhoobada Dhuxul Dhuxul